मैले पिउँदा नखसेको जहाज – Gulmiews
मैले पिउँदा नखसेको जहाज
‘आई विल ह्याव ब्लुमर्स ओरिजिनल’, रंगीबिरंगी बोतलले सजिएको बारमा खालि बोतल जस्तै उदाङ्गो र कपास जस्तै फुरुङ्ग देखिने बारमैड तर्फ आदेशात्मक शैलीमा दाइ बोले।
‘एण्ड गिभ हिम ए पाइण्ट अफ कार्ल्सबर्ग।’
‘जौ को झोल हो केटा यतातिर नखाई चल्दैन तैले पनि आज दिन गर्नु पर्यो’, दाइले बारमेड र म दुवैतर्फ एकै चोटि बोले।
‘ल आइज टेबलमा बसौं’, भन्दाभन्दै दाइले हातमा समातेर बार नजिकैको एउटा टेबलमा मलाई बसाले। बस्न नपाउँदै उनै स्वेत सुन्दरीले छचल्किने गरी ल्याएको दवाई रंगको तर सङ्लो र पातलो तरल पदार्थको दुईवटा सिसाको गिलास टेबलमा बज्रियो। गिलास पनि के बिधी ठूला हुन्! मैले आम्खोराजस्तो गिलास पहिले कहिल्यै देखेको थिइनँ।
बारको माहोल पनि बडा ‘अजनवी’ थियो। म्युजिकको आवाजले गर्दा अरुले कुरा गरेको केही बुझिँदैन थियो। तथापी, नबोल्ने बिरलै थिए। सबैका मुख गाइबस्तुले मुख पाउर मारेजस्तो चलेकै थिए।
अर्धनग्न अधवैंशे महिलाहरु पनि खुट्टा लर्बराउँदै कारबोकेमा घुम्दै थिए। सबै श्वेत वर्णका। मेरो ध्यान खास गरेर त्यतै थियो। मान्छे नयाँ, परिवेश नयाँ, खाने पिउने अनि आफनै जिउने अधार समेत नयाँ। रनभुल्लमा थिएँ। कतै नेपाली पनि छन् की भनी आँखा घुमाएँ। त्यस्तो कोही देखिएन। रातो वर्णको तरलतामा श्वेत वर्णको ठोस आकारका आकृतिहरु मेरो सामुन्ने सपना सरी घुमिरहेका थिए।
हाम्रो टेबलमा उभिएका गिलासको प्रतिबिम्बमा देखिने गरी म उनै दाइसँग छु, रामभक्त दाइ। विदेशमा मेरा आफन्त, अविभावक, सहयोगी सबैथोक उनै हुन्। मभन्दा पहिले उमेरमा एक दशक भोटो फटाइसकेका रामभक्त दाइ नेपालमा हाम्रो नजिककै दाजुभाइ थिए।
स्कुल सकेर शहर पसेका राम दाइ म हाइस्कुल पस्दै गर्दा बेलायत पसेका हुन्। भाउजू कल्पना र छोरी सरुसँगै जिन्दगीको मध्यान्तरमा लर्खराएजस्ता देखिने उनको यतातिर राम्रै परिपन्च छ। म अहिले उनकै निवासमा आश्रित छु, उनी सहयोगी र मायालु दुवै छन् मेरो जीवनको यो कालखण्ड उनकै होस्टे हैसेमा अडिएको छ। मलाई सानैदेखि माया गर्ने उनै रामभक्त दाइसँग नशालु पेयले भरिएको गिलास साक्षी राखेर बसेको छु। उनकै बोलावटमा म बेलायत भित्रिएको थिएँ।
‘किन टोलाएको कान्छा ?’, यतातिर कसैको मुखमा हेरी राख्नु हुँदैन क्या, नराम्रो मान्छन्’, दाइले मेरो ध्यान आफूतर्फ खिच्ने कोशिश गरे।
‘तेरो काम पनि मिल्यो, अब अर्को हप्ताबाट कोठाको पनि व्यवस्था भएको छ, मलाई खुसी लागेको छ तँलाई सेटल गर्न पाउँदा बुझिस्’, अलि गम्भीर मुद्रामा भने।
उसो त उनी पनि घरमा मसँग खासै भलाकुसारी गर्न पाउँदैनन्। हप्ताको साठी घण्टा रेस्टुरेन्टको काम, एक दिन छुट्टी। त्यसमाथि आधा त भाउजूकै कचकचमा चाउरिएका छन उनी! कल्पना भाउजूको गनगने स्वभाव छ।
नेपालबाट आएपछि विगत एक महिनादेखि उनको घरमा आश्रय लिएको मलाई पनि भाउजूको व्यवहार त्यति पच्दो लाग्दैन। ‘भए भरका मान्छेलाई घरमा पालेर कहाँ सकिन्छ र, चाँडो कोठाको व्यवस्था गर्दिनुस्’, एकदिन सिटिङ्ग रुममा टिभी हेर्दै गर्दा उनीहरुको कुरा सुनेको थिए।
‘ऊ घरकै मान्छे हो, अर्को व्यवस्था नहुन्ज्याल परिवारको सदस्यकै रुपमा बस्नेछ बुझ्यौ’, यही जवाफले गर्दा दाइप्रतिको श्रद्धा जीवनभर हराउँदैनजस्तो लाग्छ मलाई ।
‘कान्छा रेईज द ग्लास’, म झस्किएँ।
“दाइ मैले अहिलेसम्म लिएको छैन,’ मैले निकै गह्रौ पाराले भनेँ। ‘मलाई थाहा छ कान्छा, म पनि त्यही परिवारबाटै आएको हूँ। आज नपिएर जीवन भर पिउँदिन भन्ने लाग्छ भने कर गर्दिनँ,’ दाइले भने।
‘कान्छा बाले मैले खान्छु भन्ने थाहा पाउने हो भने के भन्नु होला ‘, यसो भन्दै गर्दा आफैं झस्किए।
सम्बन्धमा काका भए पनि मेरो बुवाप्रति दाइको श्रद्धा अपार थियो। सायद पढ्ने उत्प्रेरणासहित शहर पठाउने मेरो बुवाको भूमिकाले उनलाई सधैं छोई रहन्थ्यो ।
चियर्स गर्नु अगाडि दाइले मलाई अनेकन उदाहरण दिएर रक्सी पिउनु नराम्रो होइन, यतातिर सबैले पिउँछन् भने। ‘ दिन रात काममा खट्नु पर्छ, थाकेर लखतरान भइन्छ। यसो एकदुई गिलास लिएपछि शरीर चङ्गा हुन्छ। यस्तो ठाउँमा बसेर नपिएर गुजारा चल्दैन।’
त्यो परीवेशमा मैले पिउन नकार्नु असम्भव प्राय नै थियो। मन नलागी नलागी मैले मेरो गिलास उठाएँ। तर, कताकता मेरो मनको कुनै कोप्चेरोमा अबका दिनमा मैले पिउँदा पनि हुन्छ भन्ने विचार सायद लुकेर बसेको थियो।
मलाई लाग्यो हुन पनि त हो संसारले पिएको चीज मैले लिँदा केनै पो जहाज खस्ला र? यी दाइ पनि त मेरै काकाका छोरा हुन्, म भन्दा जान्ने सुन्ने छन् उनकै बाटोमा नहिडेर के नै पो बन्न सकिएला र विदेशमा!
हातमा गिलास समाएको त्यो बेलाको यति छोटो समय भित्रै ममा दुनिया भरका भावनाहरु तरंगित भइरहे। ‘गिलास उठाएपछि मुखमा नलागी भूईंमा राख्नु हुँदैन, कम अन’, दाइ कै बोलीले म फेरी झस्किएँ। आखा चिम्म गरेर चिरिप्प पारें । टर्रो, तीतो। बताउनै नसक्ने खालको नमिठो स्वाद मुखबाट गुज्रियो।
‘कस्तो लाग्यो त?’ दाइले सोधे। म अझै टाउको हल्लाउँदै थिएँ।
‘ल आज देखि तैले पनि जात फालिस्’ , यो वाक्यांश सहित दाइ गलल हाँसे। तर, जात फालिस भन्ने शब्दले मेरो मुटुमा एक पटक ढ्यांग्रो ठोक्यो ।
‘हुन त यो राम्रो चिज होइन ,तर जमाना फेरियो लिमिटमा बसेर खायो भने भाइसाथीमा यसको मजा र इज्जत बेग्लै छ।’ जीवनकै पहिलो चुस्की पछिको मेरो गम्भीरता देखेर दाइले सम्झाउने स्वरमै भने।
‘यो ठाउँमा त मेरो आमा बुवा जे भने पनि तपाईं त हो नि दाइ, तपाईंसँगै बसेर लिँदा मलाई सजिलो र गाह्रो दुवै सँगसँगै भएको छ’, मैले अलि सजिलो गरी बोलेँ।
दाइसँगको कुराकानीमा फरक देखिन खोजे पनि त्यो हल्का चुस्किले भने घोची नै रहेको थियो।
मैले यति नमिठो चिज जीवनमा कहिले पिएको थिइनँ। नाकै थुनेर भए पनि मेरो चुस्कीको रफ्तार बढाउँदै लगें। जे भयो भयो अब त्यही लाग्ने भन्ने के हो मलाई पनि होस् भन्ने चाहन्थेँ। मैले आधा गिलास नपार्दै दाइले अर्को ब्लुमर्सलाई भेट गरिसकेका थिए।
‘आज तेरो पहिलो ड्रिंक्स हो, धेरै लिनु हुँदैन’, दाइले मेरो मात्राको सवालमा भने स्वाभाविक रुपमा सीमा तोकी सकेका थिए।
बारको माहोल तात्तिँदै थियो। सप्ताहान्तको शुरुवात, बेलायतका स्थानीयहरु आफ्नै पव नामको भट्टीमा झुमेका थिए।
‘दाइ, यहाँ यसो सितन पाइँदैन र भन्या?’, गिलास निथ्रिँदा घाँटीले पाएको सकससँगै मैले सोधेँ।
‘हाम्ले खाने जस्तो के छ र खै? चिप्स मगाउँला नि त,’ म्युजिकको तालमा सोफामा टेकिएको पिठ्यूँबाट तंग्रिएर भुईंमा झुन्डिएका खुट्टा हल्लाउँदै दाइले भने।
‘दाइ यो अलि निल्न सजिलो हुने खालको केहीँ हुदैन र भन्या तपाईंले लिएको त अर्कै छ’, कतिखेर लाग्ला भन्ने सुरमा मेरो गिलासको बियर मैले सिध्याइसकेको रहेछु। दाइ सायद चौथो राउण्डमा थिए।
‘पख बेलिज मगाई दिन्छु तँलाई, भन्न त लेडिज ड्रिंक्स भन्छन् तर खान मिठो हुन्छ,’ दाइको जवाफसँगै म पनि त्यो मिठो ड्रिंक्स प्रति उत्सुक भएँ।
लाइभ म्युजिकमा डान्स गर्दै गरेकी एउटी सुन्दर किशोरीको हाउ भाउले मेरो नजर घुमाएको थियो। भष्म दलेको जस्तो शरीरको तीन चौथाई भागको वस्त्र विहिनता मेरो अर्को कौतुहल थियो। हातमा वाइनको गिलासले हेर्नेलाई पनि मात लगाउँथ्यो। नारीको अस्तित्वमा रहने प्राकृतिक सुन्दरता अनि त्यस माथिको शृंगारले ज्योति थप्ने मुहारको कान्तिका कथामा अभ्यस्त मेरा लागि सायद नशाले निर्वस्त्रताको महत्वलाई पनि उजागर गरेछ क्यारे। दाइले मलाई कोट्याएरै भने, ‘कान्छा तँलाई लाग्यो की क्या हो? किन एकोहोरिएको?” म पुन ध्यान विकर्षण गर्दै दाइ तिरै फर्किएँ।
वाइनको प्यालामा नाच्दै गरेको सुन्दरी आफ्नै परिवारको साथमा रहेको कुराले मेरो मनमा झनै कौतुहल भयो। बुवाआमासँगै बसेर छोरीले यसरी पिउने चलनको समाजका अन्य थिती कस्ता होलान्? दाइलाई धेरै प्रश्न हरु सोध्न चाहन्थेँ तर म्युजिकको लगातार चर्को धुनमा गफगाफ पनि उति साह्रो चल्न सकेको थिएन। मलाई त कतिखेर एकान्त ठाउँमा बसेर दाइसँग गफिन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने थियो ।
दाइसँग कुरा गर्न नपाउँदा मेरो मन दुईवटामा बाँढिएर आफ्नै संवादमा भुलेको थियो। यसैक्रममा घरीघरी मैले जीवनमा पहिलो पटक पिउँदै गरेको कुराले भने टोकिरहन्थ्यो। मलाई लाग्थ्यो मैले साह्रै अनर्थ गरिरहेको छु।
आफ्नै मनको दोहोरो संवादमा भुल्दै गर्दा दाइ कतिखेर ओझेल परि सकेछन्। यताउता हेर्दा कतै नदेखेपछि मलाई अर्को विचारले छोप्यो। यही मौकामा पहिलेको बाक्लो दुधमा चिनी हाले जस्तो ड्रिंक्स थप्ने! हुन पनि यो सुरुमा पिएको पहिलो गिलासको बियर भन्दा त सयौं गुणा मिठो थियो। आखिर ड्रिंक्स मिठो पनि त हुँदोरहेछ। नेपालमा खालि पिउनेहरु किन मुख बिगार्दा हुन्। यस्तै मिठो बेलिज नपिएर! अघि दाइले मलाई अर्डर गरिदिँदाको नाम भने मैले याद नै गरेको रहेछु।
“क्यान यू गिभ मी एनोदोर बेलिज “, बार मैड संग मैले मेरै अंग्रेजीमा बोलेँ। होहल्लाको कै बिचमा गिलासको घेरा देखाउँदै उसको सानो वा ठूलो भन्ने सांकेतिक प्रश्नमा मैले पछिल्लो संकेतमा मुन्टो हलाएँ। म्युजिकको धुन मस्त बढ्दो थियो।
हातमा गिलास समातेर म पनि यसै हल्लिन थालेँ। अघि नाच्ने स्वेत सुन्दरीको खोजीमा मेरा आँखा घुम्न थालिसकेका थिए। कताकता खुट्टा पनि लर्खराए जस्तो भान हुँदै थियो।
न कसैको डर, न कुनै पीर। म मस्त आफ्नो दुनियामा झुलिसकेको थिएँ। यत्तिकैमा अघि ओझेलिएका मेरा दाइ मेरो अगाडि उभिए।
‘तैले त पहिलो दिनमै सबै भ्याउने भइस्, हिड जाउँ घर।’ उनले अलि कड्किएको स्वरमा भने। मैले पनि आज्ञाकारी बन्दै गिलासको बाँकी सिनित्त पारेर दाइको अगाडी लागें तर ‘तपाईं यतिन्जेल कता जानु भएको थियो’ भनेर सोध्नै बिर्सिएछु ।
उनी आफैं मस्तराम भइसकेका थिए। “तँलाई पिलाउनु मेरो गल्ती भयो की?’ बाटामा मेरो पाइला लत्रिएको देखेर भने। ‘होइन दाइ, विदेश गएपछि सबै पिउँछन् भन्थे। मेरो मनमा पनि कताकता अब गन्तव्यमा आइपुगियो, अरु के नै पो छ र भन्ने भयो, तपाईंको कर मात्रै पनि होइन मेरो निर्णय समेत हो’, दाइलाई समेत सम्झाउन सक्ने हैसियतमा पुगिसकेको थिएँ।
घर पुगेपछि मलाई बिस्तरमा लगेर एक गिलास पानी पिलाए र भने, ‘तलाईं अलि लागेको छ।’ आफू भान्सातिर गए। मेरा आँखा बन्द थिए, व्याक्ग्राउण्डमा घर फर्किन ढिला भएबापत् भाउजूको झम्टाई केही मधुर सुनिँदै थियो।
मलाई अनायासै निकै गाह्रो भएर आयो। पेटमा ज्वारभाटा आएजस्तो लाग्यो, मुख तम्तमयाईलो हुदै थियो। टाउको फुट्ला जस्तो गरी दुख्यो। अचानक यत्तिकैमा पहिले बारमा पिएको ड्रिंक्स र चिप्सको मिसावट मेरो मुखबाट फोहोरा बनेर निस्कियो। मैले थाम्नै सकिनँ। पेच्कारीले छेपे जसरी जोडतोडको आवाजसँगै मैले बिस्तारा र बिस्तारा जोडिएको भित्ता समेत सबै रङ्ग्याइदिएँ।
मैले दाइ भाउजू दुवै मेरो कोठामा छिरेको थाहा पाएँ।
‘मेरै कारणले हो दाइले गर्दा होइन भाउजू, माफ पाऊँ।’ मुखबाट फुटेको मूल रोकिनसक्दै मैले बिन्ती बिसाएँ। म अझै पनि अर्धचेतनामा थिएँ।
‘यताका त बिग्रे बिग्रे, भर्खर नेपालबाट आएका जवान मान्छेको हेर यस्तो चाला!’ यस्तालाई यहाँ एक दिन पनि राख्ने होइन , कोठा पनि तुरुन्तै सारी दिने, भोलि नै बुवालाई फोन गरेर सबै कुरा भनिदिनु पर्छ।’ भाउजूको एकोहोरो बर्बरका केही अंश मेरो दिमागमा पर्दै थिए।
‘अरु जे गर्नुस्, बुवालाई भन्ने कुरा प्लिज भाउजू,’ बुवाको नाम सुन्ने बित्तिकै मेरो चेतनाको बिर्को लगभग पुरै खुलिसकेको थियो। भाउजूले बुवालाई फोन नगरी नछाड्ने बताएपछि मेरो हंसले थात छाडेजस्तो भयो। म घोप्टो मुन्टोमै रुन थालेँ। रुवाई सुँक्कसुँक्क बाट हुँक्कहुँक्क सम्म चलेको थियो।
“कान्छा! ए कान्छा! के भो तलाईं? किन कराएको हँ ?’ दाइले जोडले हल्लाएपछि म झल्याँस्स बिउझिएँछु। मेरो शरीर पसिनाले निथ्रुक्क भिजेको थियो। ‘सपना देखिछस् क्यारे, कराए जस्तो सुनेर तँलाई उठाएको,’ दाइले भने।
हिजो हामी ड्रिंक्स गर्दागर्दै तँ खाना खाएर सुतिहालिस्, हाम्ले त चार बजाएछौं, आज अलि गह्रौं जस्तो भएको छ’, हिजो ढिला बसेकोमा दाइ आफ्नै गनगनमा थिए। ‘बाहिर बार तिर जाउँ भनेको जाडो छ दाइ घरमै बसौं भन्यो रविले पनि, राती हल्ला गरे भनेर तेरी भाउजु बम्केर बस्न छैन।’ दाइ आफ्नै धुनमा फत्फताउँदै थिए।
मैले भने पहिला बिस्तरा र भित्तामा हेर्न पुगे कतै केहि फोहोर पनि थिएन। आफैंलाई राम्रोसँग नियालेँ म बिस्तरामा सहि सलामत नै थिएँ, तरपनि डर लागी रहेको थियो। यो सबै सपना थियो भन्ने छरितो निस्कर्षले शरीरमा यति उमंग ल्यायो की म जुरुक्कै उठेर बसेँ। रक्सी विपना होइन सपनामा पिएको खुसीले मन गदगद भयो। पहिलो पटक पिउँदाको उन्माद र पीडा दुवै सपनामै बिलाए।